အသံအင်ဂျင်နီယာ - Temp | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - Temp
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - Temp
ရာထူး: အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - Temp
ကုမ္ပဏီ: Blizzard Entertainment က
Blizzard Entertainment ရဲ့အသံဦးစီးဌာနတစ်ခုခြွင်းချက်ရှာဖွေနေသည် အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် အမျိုးမျိုးသော Blizzard Entertainment ကဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျယ်ပြန့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသံကိုရောစပ်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအဖြစ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်ရောစပ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါသံကိုအင်ဂျင်နီယာအမျိုးမျိုးသောဌာနများနှင့်ပေးတဲ့ dialog, အသံသက်ရောက်မှုများနှင့်ရံဖန်ရံခါရောစပ်တည်းဖြတ်အစည်းအဝေးများကျော် Pre-မှတျတမျးတငျထား / တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်စီမံကိန်းတွေ, အင်ဂျင်နီယာ Voice ကို, ပေါ်ခဲအသံကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ, signal ကိုစီးဆင်းမှုကြားဖြတ် troubleshoot ဖန်တီး Pro ကို Tools များတင်းပလိတ်များပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောစပ် consoles စလုပ်ကိုင်ရန်တစ်ခုထူးချွန်နိုင်စွမ်းရှိသင့်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, တင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်အဆင်ပြေလိမ့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စည်းရုံးရေးနှင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များရှိပါတယ်, ဦးတည်ချက်နှင့်ဝေဖန်မှုများယူပြီးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, တစ်ကိုယ်တော်နှင့်စီမံကိန်းကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး, ဦးစားပေးရွှေ့ပြောင်းဖို့လွယ်ကူစွာချက်နဲ့ဖြစ်ပြီး, တန်းတူထိရောက်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သင့်တယ် ။
ဒီအနေအထားဟာယာယီအနေအထားဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3ကြာရှည်ဦးမည် -6လအတွင်းရှည်လျား။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောစပ် consoles စတွေနဲ့အတွေ့အကြုံကို
(ပေးတဲ့ dialog မှတ်တမ်းတင်အပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူ) တိုက်ရိုက်အသံဖမ်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို
တည်းဖြတ်ပေးတဲ့ dialog အတွက်တတ်ကျွမ်း
Pro ကို Tools များအပါအဝင်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းများနှင့်စက်အပေါ်စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအသံနဲ့အလုပ်လုပ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ကိရိယာများ,
အတှေ့အကွုံ Windows နဲ့ Macintosh operating စနစ်များကို အသုံးပြု. နှင့်ဖြေရှင်းရာမှာ
တစ်ထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖော်စပ် / recording ကိုအတွေ့အကြုံကို
* ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ Irvine ရုံးတည်ရှိသောအပူချိန်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်သတိပြုပါ။
လျှောက်ထားရန်, သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အလုပ်၏နမူနာတခု link ကိုတစ် PDF ကိုတင်ပြပါ။
Blizzard Entertainment ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းကြီးထွားလာရန်ကျူးလွန်နေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့အလုပ် / ဘဝဟန်ချက်ပေးတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိနှင့်အတူရက်ရက်ရောရောအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အခွင့်အရေးကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အပြင်းအထန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဝန်ထမ်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးထွားမှုအတွက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူတွေအရာအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ core ကိုတန်ဖိုးများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက် ... အရှိဆုံးမော်ကွန်းဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများဖန်တီးဆက်ကပ်အပ်နှံကြသည်။ ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ!
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-04-26
ယခင်: Shure NAB 2017 မှာAxient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်မိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: ထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက် Artificial, မလုပ်ခဲ့ပြီးနေ